အကောင်းဆုံး Fasoracetam (110958-19-5) ထုတ်လုပ်သူ - Cofttek
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Fasoracetam အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်လစဉ်ကီလိုဂရမ် ၁၅၀ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
Fasoracetam (၁၁၀၉၅၈-၁၉-၅) Specifications
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 196.250 g / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 57 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဓာတုအမည်: (R) -1 - ((5-Oxo-2-pyrrolidinyl) carbonyl) piperidine
နာမ်: Fasoracetam; N- (5-Oxo-D-prolyl) piperidine; NS-105; NFC-1; LAM-105 ။
InChI Key ကို: GOWRRBABHQUJMX-MRVPVSSYSA-N ကို
ဘဝတစ်ဝက်: 1.5 နာရီ
လျှောက်လွှာ: Fasoracetam သည်လူကြိုက်များသော racetam မိသားစုပိုင်စမတ်ဆေးသို့မဟုတ် nootropic ဖြစ်သည်။
Fasoracetam (၁၁၀၉၅၈-၁၉-၅) NMR Spectrum
Fasoracetam (110958-19-5) ကဘာလဲ?
LAM-110958၊ NFC-19 နှင့် NS-5 ဟုလည်းလူသိများသော Fasoracetam (105-1-105) သည်လူကြိုက်များသော racetam မိသားစု ၀ င်ဖြစ်သောစမတ်ဆေးသို့မဟုတ် nootropic ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်အထူးသဖြင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ မှတ်ဉာဏ် (သို့) တီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်များတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းကြောင့် Nootropics သည်လူကြိုက်များလာသည်။
Fasoracetam (110958-19-5) အကျိုးခံစားခွင့်
Fasoracetam သည် ဦး နှောက်တွင်းရှိကိုလက်စ်အဆင့်ကိုတက်ကြွစေနိုင်သောစွမ်းရည်ရှိပြီးသုံးစွဲသူများကိုအပိုစိတ်ကြွဆေးမသုံးရန်မလိုဘဲအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အချက်ပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ လှုံ့ဆော်သူများနှင့်မတူဘဲဤ nootropic သည်တည်ဆောက်ထားသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုလွှတ်ပေးရန်လှည့်ပတ်သွားလာနေသည်ဟုမခံစားရဘဲအာရုံစူးစိုက်။ ရှေ့တွင်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့သင်ဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးအလုပ်ကိုသာအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်
ဤ Fasoracetam အကျိုးကျေးဇူးများသည်သိမြင်မှုအားနည်းသောသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်လည်းအလွန်ကောင်းပါသည်။ fasoracetam ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ဟာပိုကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုနိုင်စွမ်း၊ သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုပိုပြီးသဘောပေါက်နားလည်လာမယ်၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့အကဲဖြတ်မှုစွမ်းရည်တွေမှာလည်းနုပျိုလာမှာပါ။
အခြား Fasoracetam အမှုန့် (၁၁၀၉၅၈-၁၉-၅) သည်အခြားစိုးရိမ်ဖွယ်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ကွဲပြားမှုကိုဖြစ်စေသည့်အခြားအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ၎င်းသည်ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲအာရုံကြောမှသက်သာမှုနှင့်ချောမွေ့မှုကိုသက်သာစေသည်။ glutamate နှင့် GABA များဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ခံစားမှုကိုလွှမ်းမိုးသောအာရုံကြောဓာတုဗေဒပစ္စည်း ၂ ခု၏ receptors များသို့ဤဆေးသည်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
စိုးရိမ်ပူပန်သူများသည်အလွန်အကျွံတက်ကြွနေသောအချိုမှုစနစ်ရှိသည်။ fasoracetam လုပ်တာကအဲဒီ system ကိုဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ဖို့ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည် GABA receptors များကိုအထက်သို့လှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်ငိုက်မျဉ်းခြင်းမရှိသောအေးဆေးတည်ငြိမ်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးသည်။
fasoracetam အမှုန့်များ၏အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများလူသားများကန့်သတ်ထားသည်မဟုတ်။ fasoracetam nootropics ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကစမ်းသပ်မှုများအတွင်းဆေးကိုသောက်ပြီးနောက်တွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းကိုတိရိစ္ဆာန်များကပြသခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Fasoracetam (၁၁၀၉၅၈-၁၉-၅) အသုံးပြုမှု?
fasoracetam ရဲ့စိတ်ကိုတိုးတက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကချက်ချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်အခြေအနေသို့ရောက်စေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ အသုံးပြုသူသည် Fasoracetam ဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်သည့်အခါတိုင်း GABA receptors ၏ထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ဒါဟာ GABA receptors အတွက်လည်ပတ်မှု၏လျော့နည်းအဆင့်စိတ်ဓာတ်ကျစေခြင်းငှါဆေးပညာသက်သေပြခဲ့သတိရပါ။
ဒါဟာ GABA အဲဒီ receptor ၏လည်ပတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောဒြပ်စင်များသည်အမျိုးမျိုးသောအသုံးချမှုများနှင့်အတူစိတ်ဓာတ်ကျစေသည့်ဒြပ်ပေါင်းများ၏မှော်အသစ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ ထို့ကြောင့် fasoracetam သည်စိတ်နိမ့်ကျသူနှင့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုမရှိသောသုံးစွဲသူများအတွက်အလွန်ထိရောက်နိုင်သည်။
သငျသညျလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ့ကြုံခြင်းနှင့်တစ်ချိန်လုံးစိတ်ဓာတ်ကျလျှင်, fasoracetam သင်ပိုမိုကောင်းမွန်ခံစားရရန်နှင့်သင်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုအခြေအနေရရန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ပို၍ အံ့ is စရာကောင်းသည်မှာသင်ဆေးသောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးနောက်၌ပင်သင်၏ GABA receptors များသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးသင်ပိုမိုသက်သာခံစားရရန်ဆေးဝါးအပေါ်မှီခိုမည်မဟုတ်ပါ။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Fasoracetam nootropic သည် ဦး နှောက်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သော acetylcholine နှင့် choline တို့ပါဝင်သောဓာတုပစ္စည်းများအပေါ်သက်ရောက်သည်။ ၎င်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်အတွင်းပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အာရုံကြောကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ ထို့အပြင်အခြား Racetam မိသားစု Nootropics ကဲ့သို့၎င်းတွင်မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းသိမ်းထားသောအရည်အသွေးများလည်းရှိသည်။
သင်ဒီဆေးကိုသောက်လိုက်ရင်မှတ်ဥာဏ်ပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်။ သင့်တွင်အမှတ်တရများကိုပိုမိုထိရောက်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းလည်းရှိသည်။ ဆိုလိုတာကသင်ဒီဆေးကိုသောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုခုသင်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီအသိပညာကိုအောင်မြင်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မျိုးဆက်သစ်တိုက်ခိုက်ရေးမှတ်ဉာဏ်ယိုယွင်းမှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာထောက်ကူပေးပြီး၎င်းတို့ပိုမိုဟောင်းနွမ်းလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုကောင်းမွန်သောမှတ်ဉာဏ်ရှိစေသည်။
Fasoracetam (၁၁၀၉၅၈-၁၉-၅) ဆေးတခါသောက်
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏သက်ရောက်မှုများကိုလူသားများအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် fasoracetam သောက်သုံးမှုအတွက်တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်မရှိပါ။
ADHD နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များပါဝင်သောလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် fasoracetam သည်အစကန ဦး ဆေးဖြင့် ၅၀ မီလီဂရမ်မှ ၈၀၀ မီလီဂရမ်အထိနှုတ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာများ - မောင်းနှင်သည့်ဆေးညွှန်း ၄၀၀ မီလီဂရမ်အထိတစ်ပတ်လျှင်လေးကြိမ်သောက်သုံးသည်။ fasoracetam စိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင် ၁၀ မီလီဂရမ်မျှသာသောက်သုံးခဲ့ပြီးသူလိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သည်။
ဂျပန်ယောက်ျား ၁၄ ယောက်ပါ ၀ င်သည့်လက်တွေ့လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်နေ့စဉ် ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကိုနေ့စဉ်သောက်ခဲ့သည်။ ဒီသောက်သုံးသောထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ fasoracetam သည်အလွန်အစွမ်းထက်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်ခန့်သောက်သုံးသည့်ပမာဏမှ ၂၀ မီလီဂရမ်အောက်သုံးစွဲသူများသည်အချို့သုံးစွဲသူများအတွက်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။
Nootropics အားလုံးနှင့် fasoracetam တို့အတူတူပင်နှင့်အတူ, အနိမ့်ဆုံးထိရောက်သောသောက်သုံးသောနှင့်အတူစတင်နှင့်လိုအပ်သောအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးမြှင့်ဖို့ကပညာရှိရာရောက်၏။
Fasoracetam အမှုန့် ရောင်းမည်(Fasoracetam အမှုန့်အမြောက်အများကိုအဘယ်မှာဝယ်ယူရမည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် Fasoracetam အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစွာ၊ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
 Ogasawara T, Itoh Y, Tamura M, et al ။ NS-105 မှမှတ်ဥာဏ်တိုးမြှင့်သောမှတ်ဉာဏ်ပြတ်တောက်မှုကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေရန် cholinergic နှင့် GABAergic စနစ်များပါ ၀ င်ခြင်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 1999; 64 (1): 41-52 ။ Doi: 10.1016 / s0091-3057 (99) 00108-2
 Elia, ဂျေ, Ungal, G. အ, Kao, C. et al ။ mGluR neurotransmitter အချက်ပြနှောင့်အယှက် ADHD နှင့် glutamatergic ဗီဇကွန်ယက်ကိုမျိုးကွဲနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်အတွက် Fasoracetam ။ နတ် Commun 9,4(2018) ။
 Foran အီး, Trotti D. အချိုမှုန့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် amyotrophic နှစ် ဦး နှစ်ဖက်နဗ်ကြောအတွက်မော်တာအာရုံခံဆဲလျယိုယွင်းဖို့ excitotoxic လမ်းကြောင်းကို။ Antioxid Redox Signal ။ 2009; 11 (7): 1587-1602 ။ Doi: 10.1089 / ars.2009.2444